नेपालमा कोहीपनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छैनन्: डा. रुना झा « Postpati – News For All
नेपालमा कोहीपनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छैनन्: डा. रुना झा
सरकारको दाबीमा सत्यता छैन, नेपालमा पनि संक्रमित छन् परीक्षण पुगेन: डा. दिक्षित
चैत ६, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले नेपालमा कोही पनि कोरोना भाइरसको संक्रमित नभएको स्पष्ट पारेपनि चिकित्सक समेत रहेका नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले सरकारको दाबीमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले रोगको संक्रमण नभएको अवस्थामा हल्ला र भ्रमको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरिन् । ‘हाल देशमा कसैलाई पनि कोभिड–१९ को संक्रमण छैन’– डा. झाले भनिन्,‘आजसम्म आशंकित ५२१ जनाको परीक्षण भइसकेको छ ।’
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले कोरोना भाइरस नेपालमा आउने÷नआउने कुनै ग्यारेन्टी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘रोग आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ । यसबारे जनमानसमा झन बढी त्रास बढेको पाईएको छ ।’
उनले नेपालमा जाँचनै हुँदैन कि रोग नै छैन भन्ने प्रश्न धेरैमा भएको भन्दै स्वस्थ व्यक्तिले मास्क लगाउन नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘आतंकित नहोऔं, सचेतना अपनाऔं ।’
पुनले हुलमुलमा नजान, कसैसित नजिक भएर कुरा नगर्न, साबुन पानीले हात धुँदा वैज्ञानिक आधारले धुन, संक्रमित भएमा घरको छुट्टै कोठामा बस्नपनि सुझाव दिए । पुनले यो महामारीबारे अशिक्षितलाई भन्दापनि शिक्षितलाई सम्झाउन गाह्रो भएको समेत गुनासो पोखे ।
नागरिक समाजका अगुवा चरण प्रसाईले कोरोना भाइरसको मामलामा सरकारलाई विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले टेकु अस्पतालका प्राविधिकले बिरामी फर्काइदिएकोमा आपत्ति गर्दै सरकारको विश्वास गुमेको गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘विरामी फर्काउने र राम्ररी चेकजाँच नहुने भएपनि सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने ?’ स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको अभिव्यक्तिका कारण पनि झन विश्वसनियता गुम्दै गएको उनको भनाई थियो ।
प्रसाईंले कसैलाई पनि नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा खेलवाड गर्ने छुट नभएको भन्दै सरकारको यसतर्फ ध्यानाकार्षण गराए । सरकारले जनतालाई कोरोना भाइरसबारे जानकारी दिनुपर्ने उनको जोड थियो । धेरै मानिसमा समस्या लिएर अझैपनि कहाँ र कसरी जाने भन्नेमा अन्यौलता रहेको भन्दै सरकारले जनतालाई स्पष्ट र आश्वस्त पार्न नसकेको उनको गुनासो थियउो । उनले भने,‘सरकारले जनताको आशंका मेटाउनुपर्छ ।’
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जित राम लामाले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए । उनले आफुहरु सरकारसँग सहकार्य गरी महामारी नियन्त्रण गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
सरकारले यसमा जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकेको भन्दै उनले सबैको आफ्नो कार्यक्षेत्र सुरक्षित भई ढुक्क महसुस गर्ने वातावरण मिलाइदिन समेत आग्रह गरे । उनले भने,‘सरकारले ढुक्क हुनेगरी वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी, मिडिया र नागरिकलाई कसरी सुरक्षित हुने भन्नेमा तालिम दिन पनि म आग्रह गर्दछु ।’
एनले यो महामारीबाट बच्नको लागि अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सहयोग माग्नुपर्ने पनि बताए । उनले यसमा समूदाय र सामुदायिक संस्थालाई परिचालित गर्नु सरकार तयार भएमा नागरिक समाज पनि तयार रहेको बताए ।
उनले सरकारको आलोचना भन्दापनि महामारीको विरुद्धमा कसरी लड्ने भन्नेमा सचेत हुनु आजको आवश्यकत्ता रहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउन आग्रह गर्दै उनले यो लडाई जितेमा सारा नेपालीको जीत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
#डा. रुना झा